Ukubuka Okuphelele Kwe-HTML 5 | Martech Zone
NgoMgqibelo, Januwari 9, 2010 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Ngenzeke kulo mbukiso omuhle nge M. Jackson Wilkinson ku-HTML 5 naku-CSS 3. Ukubukeka okuphelele kuzinguquko ezizayo ze-HTML ne-Cascading Style Sheets. Kunzima ukukholelwa ukuthi i-HTML 4 isineminyaka engaphezu kwengu-10 ubudala!
Ukuxhaswa kwesiphequluli kwe-HTML 5 kuzoqhubeka nokushayela izinhlelo eziningi ezengeziwe online. Kubonakala sengathi izinsuku zokuthenga nokufaka isoftware ngaphandle kwemidiya zisheshe zibe yinto yesikhathi esedlule. Amandla wokuthuthukisa nokukhulula ukwakheka okuhle nezinhlelo zokusebenza kuzoba lula… ngezikhathi ezimisiwe nezinsizakusebenza zincipha.
Tags: amashidi wesitayela we-cascadingcSScss3htmlhtml5